SPAM na Industrylọ Ọrụ Izi ozi Ederede | Martech Zone
SPAM na Industrylọ Ọrụ Izi Ozi Ederede
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 7, 2011 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Ulo oru eledaala anya na ozi ederede n’ekwe ntị n’ezi. E tinyela ederede ederede, nke a na-akpọ SMS (Short Message System) na ndò karịa ngwa weebụ ndị a ma ama. Agbanyeghị, ọ bụghị ekwentị ọ bụla bụ ama ma nwee ike iji ngwa. Ekwentị ọ bụla na-enye ohere izi ozi ederede.
Ka azụmaahịa na-alaghachi na usoro a dị ịtụnanya, ọtụtụ na-eleghara ikike ndị dị mkpa anya. Industrylọ ọrụ ahụ na-achọ ịpụ apụ abụọ maka nnata, mana ebe ọ bụ na etinyela ihe ndị a chọrọ n'otu opt-in. SPAM na-arị elu ma ọ ga-enwe mmetụta. Ọtụtụ ndị ọrụ ekwentị na-akwụ ụgwọ maka ederede ọ bụla anatara - imeghe ụlọ ọrụ maka ikpe.
a akụkọ gosiputara nnukwu nsogbu na ahia ahia ederede ederede. Site na ịrị elu na spam ozi ederede, ịdị irè nke ahịa site na ọwa a ga-ada nke ọma ma ọ bụrụ na enyochaghị ya. Ihe karịrị ụzọ abụọ n’ụzọ atọ nke ndị bi na United States na-anata spam ozi ederede, ọ bụ oge maka azụmaahịa ịmalite ịmara mmetụta ozi ederede ederede na ndị ahịa ha na ịhọrọ ndị na-eweta ngwanrọ dị ka Tatango ndị guzobere iwu enweghị ndidi maka spam ozi ederede. Derek Johnson, Tatango CEO
Na July 2011, onye na-eweta ozi ederede Tatango nyochara ndị ahịa 500 US iji nweta nghọta banyere ahụmịhe ha na spam ozi ederede. The nnyocha e mere na-eji ike ndị na-esonụ infographic na ozi ederede spam.
68% nke ndị na-aza ajụjụ nyocha na-ekwu na ha anatala spam ozi ederede.
Womenmụ nwanyị nọ n'okpuru afọ 17 nwere ike ịnata ozi ederede ederede na 86% nke ndị na-aza ajụjụ na-ekwu na ị natara ozi ederede spam.
55mụ nwanyị 51 + nwere ike ịnata ozi ederede ederede na XNUMX% nke ndị na-aza ajụjụ na-ekwu na ị natara spam ozi ederede.
Menmụ nwoke na ụmụ nwanyị yikarịrị ka ọ ga-abụ ndị nnata ozi ederede spam.
Ozi ederede ahia site na Tatango.
Nkwado anyị bụ mgbe niile iji jiri usoro nnabata abụọ. Nke ahụ chọrọ onye ọrụ ka ị buru ụzọ denye aha site na saịtị weebụ ma ọ bụ ozi ederede, sokwa na nkwenye nke ha chọrọ ịdenye aha. Mgbe anyị debere ọrụ a maka ndị ahịa anyị na Ekwentị mkpanaka, anyị na-arịọ ụfọdụ ozi - dị ka koodu zip. Nke a ga - enyere anyị aka izipu ozi ma emechaa koodu mpaghara, na ndị anyị debanyere aha. Nke a na - ebelata ọnụ ọgụgụ ezigara na - eme ka ọnụego nzaghachi bawanye ebe ọ bụ na ozi ndị ahụ dị mkpa.